လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့က ရှမ်းမြောက် အတွက် စာထုတ်ပြန်
လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့က ရှမ်းမြောက် အတွ...
8 ก.ย. 2562 - 15:13 น.
အရပ်သားတွေ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းက တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ဒေသခံ ပြည်သူတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ဖို့ တပ်မတော်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေကို လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့က စာထုတ်ပြန် တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ကတည်းက ဖြစ်လာတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် အနည်းဆုံး အရပ်သား ၁၇ ယောက် သေဆုံးခဲ့ပြီး ၂၇ ယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ HRW (လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့) ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ဒီလိုသေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေထဲမှာ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တပ်နဲ့ ညီနောင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေကို တိုက်ပွဲတွင်းမှာ အရပ်သားတွေလုံခြုံဖို့ လုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ တိုက်တွန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ တိုက်ပွဲတွေ အတန်ကြာ ငြိမ်သက်နေတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ဆိုပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ အာရှဒါရိုက်တာ ဘရမ်အဒမ်ကတော့ " မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေဟာ အရပ်သားပြည်သူတွေကို အကာအကွယ်ပေးရေးဖြစ်တဲ့ စစ်ရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေသတွေကို လိုက်နာသင့်တယ်" လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။
ကွတ်ခိုင်အထွက်မှာ အိမ်စီးကားတစ်စီး ပစ်ခတ်ခံရ၊ ကွတ်ခိုင်-မူဆယ် လမ်းပိုင်း ယာယီ ပြန်ပိတ်
ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့် နယ်စပ်ဂိတ်တွေမှာ ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ကားတွေ ပိတ်မိ
လားရှိုး-မူဆယ်လမ်း ပြန်ပွင့်၊ ကွတ်ခိုင် အပေါ်ဘက် ဂရုစိုက်ဖို့ လိုသေးတယ်လို့ တပ်မတော်ဆို
ရှမ်းပြည်နယ် ကွတ်ခိုင်မြို့မှာ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းအချိန်က တပ်နဲ့ မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ် ၃ဖွဲ့ကြား ဖြစ်ခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် မော်ဟိတ် စုစည်းကျေးရွာမှာ နေထိုင်တဲ့ လသားအရွယ်ကလေးငယ်နဲ့ မိခင်အပြင် ရွာသား ၅ ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လက်နက်ကြီးကျည်ဆန် ကျမှန်လို့ လူနှစ်ယောက်လဲ ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန်ရရှိခဲ့သလို ကွတ်ခိုင် မြို့ပေါ် ရပ်ကွက်တစ်ချို့မှာလည်း တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက် မသန်စွမ်းကျောင်းက ကလေးငယ်တွေကို ဘေးလွတ်ရာကို တိမ်းရှောင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ ကျောင်းတာဝန်ခံ ဒေါ်မိုင်းမိုင်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာလည်း ကွတ်ခိုင်- မူဆယ်ကားလမ်းမှာ ကုန်တင်ကားတစ်ချို့နဲ့ ခရီးသည်ဆိုင်ကယ်တွေ မီးရှို့ခံခဲ့ရပြီး ပစ်ခတ်ခံရတာတွေ လည်းရှိခဲ့ပါတယ်။
ကွတ်ခိုင်မြို့အထွက်မှာ အိမ်စီးကားပစ်ခံခဲ့ရသလို ကွတ်ခိုင် - မူဆယ် လမ်းပိုင်းက မန်လွယ်နဲ့ နမ့်ဖတ်လွန် ကြားထဲမှာလဲ တွဲကား ၈ စီးကို ကားဘီးတွေ ပစ်ဖောက်ခံခဲ့ရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာ လတ်တလော ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင်း စစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူတွေ ၅၀ဝ၀ ကျော်ရှိတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ဆိုပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ အရပ်သား ၇၅၀ဝ နီးပါး အိုးအိမ်စွန့်ခွာခဲ့ရသလို လူပေါင်း ၃၅၀ဝ နီးပါးဟာလည်း စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာ ခိုလှုံခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ တိုက်ပွဲတွေ ငြိမ်သက်နေတာကြောင့် စစ်ဘေးရှောင်တစ်ချို့ မိမိတို့ရပ်ရွာတွေကို ပြန်သွားကြတာတွေလည်း ရှိတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ဆိုပါတယ်။
อัลบั้มภาพ လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့က ရှမ်းမြောက် အတွက် စာထုတ်ပြန်